Apple ကအတွက်ကုန်သွယ်ရေးမှအကြောင်းပြချက် | Apple အတွက်စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
ဒါကြောင့်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ကုန်သွယ်ကျိုးနပ်အောင်, ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆန်းသစ်မယ့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေ Apple ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကြောင်းပြချက်အများကြီးရှိပါတယ်။
ထိပ်တန်းဆယ်ပါးကို Apple တို့သည်ကြီးစွာသော binary options များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတက်သို့မဟုတ်ဆင်းသွားထငျ
Apple ကနည်းပညာစကားပြော, လူအပေါင်းတို့သည်အမျက်ဒေါသသည်။ ဒါဟာအစအချို့တစ်ဖက်ရှင်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်, စတော့ရှယ်ယာဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့် Apple က binary options များကြောင့်စိတ်ဆိုးရစရာအကြောင်းမရှိသို့သော်ရှိပါတယ်
10) Apple ကအဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်နေသည်။ စတော့ရှယ်ယာအမြဲမြေပြင်ပေါ်တွင်အဖြစ်မှန်ပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာခဏ overvalued ခဲ့ကြလိမ့်မယ်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလာမယ့်ငါသိမြင်၏။
မည်သို့ပင် Apple ကတစ်အစိုင်အခဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်သင်များသောအားဖြင့်စတော့ရှယ်ယာလုပ်နေပါလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ သငျသညျထို binary options များနှင့်အတူကုန်သွယ်တဲ့အခါမှာ, သင်စတော့ရှယ်ယာတက်သို့မဟုတ်ဆင်းသွားရှိမရှိလက်ျာခန့်မှန်းအပေါ်ပိုက်ဆံပါစေ။ သင်သွားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းဘယ်လိုပြင်ပကုန်သွယ်မှု၏အဆုံးမှာအရောင်းရဆုံးစျေးနှုန်းအားဖြင့်မထိခိုက်ပါတယ်။
9) Apple ကစတော့ရှယ်ယာချပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်င်ငွေတက်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့ကမကြာမီက hit တစ်နည်းနည်းကို ယူ. , ဒါပေမယ့်နေဆဲတစ်ခုလုံးကိုကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးအမြတ်အစွန်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်မရွေးမကြာမီဘယ်နေရာမှာမဆိုမသွားရဲ့။ တကယ်တော့ Apple ကသူတို့ပဲတစ်ဦးကို PC အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းရှိသည်ဖို့, ခငျြတယျဆိုရငျသူတို့ Microsoft ကမဝယ်နိုင်အောင်အများကြီးပိုက်ဆံစေသည်။
8) Apple ကမကြာခင်မှာသစ်ကို iPhone နှင့် iPad နှင့်အတူထွက်လာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ်, သူတို့သတင်းများအရကြီးမားတဲ့ထိခိုက်လိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာနောက်ဆုံးသူမြားကိုထက်ပေါ့ပါးပါးလွှာနေနှင့်သင်တန်း၏, သူတို့လှာဖန်သားပြင်ရှိသည်။ ပြည်သူ့မသက်ဆိုင်တော့ရှယ်ယာယခုလုပ်နေတယ်မည်သို့ဤအမှုအရာကိုဝယ်ချင်သွားနေကြတယ်, လူတိုင်းကသိတယ်။
သငျသညျထို binary options များအတွက်ကုန်သွယ်မှုသောအခါ, ထုတ်အဲဒီမှာအများဆုံးအခြားကုမ္ပဏီများအပေါ်ထက်က Apple ကဲ့သို့သောကြိုတင်ခန့်မှန်းဝင်ငွေကုမ္ပဏီအပေါ်အခြေခံပြီးခန့်မှန်းချက်စေရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။ သငျသညျအကွောငျးကိုဂရုမစိုက်ဖို့ရှိသည်အားလုံးသင့်ရဲ့ခန့်မှန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ပြန်လာအောင်ထွက်လှည့်ပုံဖြစ်ပါသည်။
7) Apple ကလည်းမျက်မှန်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒါဟာနည်းပညာမျက်မှန်လုပ်နေသူမသာ, Google, ဒါပေမဲ့ Apple ကအဖြစ်ကောင်းစွာ။ ထိုအခါငါသူတို့ထွက်လာကြသောအခါ, သူတို့ဖြစ်ကောင်းတခါပိုပြီးတစ်ခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုသင်ကအာမခံပါသည်။
ပြည်သူ့ Apple ကလုနီးပါးဘယ်တော့မှပထမဦးဆုံးထုတ်ကုန်စိတ်ကူးနှင့်အတူထွက်လာမှတကြောင်းမေ့လျော့။ အဘယ်အရာကိုသူတို့များသောအားဖြင့်လုပ်ပေးအခြားသူတွေထုတ်ကုန်နှင့်အတူထွက်လာ, ပြီးတော့သူတို့အပျေါတိုးတကျအောငျပါစေဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာသူတို့ကသူတို့အပေါ်မှာအတော်လေးနည်းနည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ စတော့ရှယ်ယာကိုဆင်းခဲ့ကြစဉ်နှင့်အညီ, Apple ကအရောင်းခြုံငုံခေါင်မိုးမှတဆင့်ရှိပါတယ်။
6) Apple အတွက်စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြသည်။ သူတို့ကပဲအချို့သောအခြားကုမ္ပဏီများကဲ့သို့အမိနစ်အတွင်းဇောက်ထိုးကျဆင်းမယူကြဘူး။ တခါတရံကသူတို့မျိုးနွယ်သို့မဟုတ်တက်ကိုအနည်းငယ်အစာရှောင်ခြင်း, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအခြားကုမ္ပဏီများထက်ခြုံငုံနေဆဲနှေးကွေးသည်။
ဤမျှလောက်ဟာသူတို့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာကိုဆင်း crashing လာရန်အဘို့အကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအကျပ်အတည်းယူမယ်လို့နှင့်ပင်ထို့နောက်လဲကျဖို့နောက်ဆုံးတဦးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ Apple ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံအတူဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦး binary options များရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ်သူတို့ကိုခန့်မှန်းလုပ်ဖို့မျှမျှတတလွယ်ကူသောအရာဖြစ်၏။ ဒွိကဘာလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုရှာဖွေနေပါသည်ရွေးချယ်စရာတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း၏လွယ်ကူပါတယ်။
5) Apple ကစတော့ရှယ်ယာကိုအလွယ်တကူတရုတ် Foxconn ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ gauged ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံ Foxconn ကုမ္ပဏီ Apple ကစျေးနှုန်းများကိုတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကြည့်ဖို့ထိုနေ့ရက်လုပ်နေတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။
နှင့် binary options များနှင့်အတူ, သင်တို့အပေါ်မှာအမြတ်အောင်စတော့ရှယ်ယာနှုန်းဒေါ်လာရာချီရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုပါ Apple။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးညာဘက်ရွေးချယ်မှုလုပ်သင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဆုလာဘ်များနှင့်အမြတ်အစွန်းအသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
4) Apple ကကြေငြာစီစဉ်ထားရှိပါသည်။ ဒါက Apple ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၏တူညီသောရက်တစ်ထုတ်ကုန်အသစ်ကြေညာမယ့်အခါလူတိုင်းသိတယ်ဆိုလိုသည်။
တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကောင်းသော binary options များရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးမှသော့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သောသင်ကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းကို Apple ကသင်စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းချင်လျှင်ပင်, တစ်ဦးမြင့်တက် start သွားကြောင်းသိသောကြောင့်တစ်ခုခုကြေညာဖို့င့်ကပြောပါတယ်သောအချိန်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ် နည်းနည်း။
ဤသည်ကိုသင်နှစ်တွင်အချို့ကြိမ်အတွင်းတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြတ်အစွန်းစေနိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်လမ်းဖြစ်၏။ ဤနည်းဗျူဟာလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလို binary options များကုန်သွယ်၌သင်တို့၏ခြုံငုံစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက်အောင်မြင်မှုစေပါတယ်။
3) Apple ကသတင်းလောက်စကားပြော, ထိုသို့အခါကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်မလွယ်ကူသည်။ အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည် Apple ကရရှိသွားတဲ့သောမီဒီယာအတွက်လွှမ်းခြုံမရကြဘူး။
အဲဒီမှာပုံပြင်တွေအွန်လိုင်းနှင့် Apple နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအတွက်ရက်သတ္တပတ်၏နေ့တိုင်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကလူတိုင်းကိုကြည့်ရှုရန်အဘို့အအများပြည်သူဖြစ်သကဲ့သို့ဤပုံပြင်များ ဆက်စပ်. ၎င်းတို့၏အညွှန်းကိန်းလိုင်းစောငျ့ရှောကျဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
သင်ပြုရန်ရှိသည်သောသူအပေါင်းတို့ကြောင်းလိုင်းလေ့လာဖို့နဲ့အလွယ်တကူ Apple ကစတော့ရှယ်ယာသွားလိမ့်မည်ကိုမည်သို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်မည်သည့်သတင်းပုံပြင်များ၏ကြိမ်တက်ကိုက်ညီဖို့ဖြစ်တယ်။
Apple ကနဲ့တူ 2) Binary ရွေးချယ်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကနားလည်ရန်လွယ်ကူလို့ပဲ။ သငျသညျနားလည်သို့မဟုတ်မသိရပါဘူးတစ်ခုခုအတွက်ထရေးဒင်းအချိန်များတွင်လှည်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့အများအပြားအခြားသူများထက်ပိုကောင်းတဲ့သူကနားလည်သောကွောငျ့ binary options များရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက Apple စတော့ရှယ်ယာအတွက်ကုန်သွယ်မှုမှကြိုက်တယ်။ သင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီနားလည်လျှင်, သင်အများကြီးပိုကောင်းလမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းတက်သို့မဟုတ်ဆင်းသည်ထိုနေ့အဘို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါက Apple ကဒါဆွဲဆောင်မှုအဘယ်အရာကိုပါပဲ။
... သင်တက်သို့မဟုတ်ဆင်းဖြစ်ပါသည်ရှိမရှိ Apple ကကုန်သွယ်မှုသင့်နံပါတ်တစ်ခုမှာအကြောင်းပြချက်:
1) Apple ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပျော်စရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရပါစို့: ။ ကကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအတွက်လူကြိုက်များကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုချစ်ကြပြီးအောင်မြင်သောပါပဲ။ နှင့်အောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများတွင်ကုန်သွယ်တဲ့ binary options များကုန်သည်များအတွက်ပျော်စရာပါပဲ။
Apple ကအတွက်ထရေးဒင်းသင်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်သင်အောင်နေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းသောခံစားရရန်ဟုတစ်လမ်းဖြစ်၏။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သငျသညျရှေ့သူတို့ကိုယ်သူတို့၏အလွန်ရှေ့ဆက်-ကြည့်အနာဂတ်နှင့်အတူကုမ္ပဏီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါတယ်။ သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာပြုလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဟုခံစားရချင်တယ်။
Tags: binary options များကောင်းတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာ, ဒွိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု options များ, ပန်းသီးများအတွက်လက်ရှိစတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ, အကောင်းတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု binary options များဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ပန်းသီးထုတ်ကုန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရကျိုးနပ်သည်, ဒါကြောင့်ပန်းသီးယံ၌အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တန်ဖိုးရှိပါသလဲ, ပန်းသီးအဘို့အစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်စျေးနှုန်းများ, ပန်းသီးအဘို့အစတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ, ပန်းသီးအဘို့အစတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများကိုယနေ့, ပန်းသီးအဘို့အစတော့ရှယ်ယာဝေစုစျေးနှုန်းများ, အရာ valuaion technique ကိုပန်းသီးစတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်